Kolikoly sy fanararaotana: nahazo fahafahana vonjimaika ny DG-n’ny ACM | NewsMada
Nahazo fahafahana vonjimaika rehefa niakatra tetsy amin’ny Tendrom-pitsarana misahana ny ady amin’ny kolikoly (Pac) 67 ha, ny herinandro teo, ny tale jeneralin’ny ACM. Nitory mpiasa vitsivitsy ao aminy ity tompon’andraikitra ity ka niitatra ka nanjary nahavoarohirohy olona ampolony. Vokany, roa naiditra vonjimaika am-ponja ka iray avy eo amin’ny ACM, ny iray avy eny anivon’ny kaompaniam-pitaterana ana habakabaka. Ny sasany, nahazo fahafahana vonjimaika ka anisan’izany ny tale jeneraly nametraka ny fitoriana. Anisan’ny naha voarohirohy azy ireo ny kolikoly sy ny fanararaotana amin’ny endriny samihafa.
Efa maromaro ny antso fanairana momba ity raharaha ity
Efa nialohavan’ny fanairana ny fitondram-panjakana hijery akaiky ny fizotry ny fitantanana eo anivon’ny ACM, miantoka ny fandehanana ny tontolon’ny fitaterana ana habakabaka, ny raharaha. Nandefa fitarainana teny amin’ny fitsirihana asa koa ny sendikan’ny mpiasa eo anivon’ny ACM.
Tsy hita ny minisitera sy ny filankevi-pitantanana
Notakina tamin’izany ny fanarahan-dalàna avy amin’ny ACM ny amin’ny tokony hanomezan-danja ny « delege sendikaly » sy ny “convention collective” eo anivon’ny orinasa ary hentitra ny tsy maintsy tanterahina haingana izany. Tsy nisy tohiny anefa hatramin’izao. Tsy fantatra ny toeran’ny ny minisitera mpiahy sy ny eo anivon’ny filankevi-pitantanana. Andrasana ny ho tohiny.